Urban Towers Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Urban Towers Forex Tusiyaha
Urban Towers Forex Tusiyaha
Urban Towers Forex Tusiyaha ku salaysan yahay celceliska dhaqaaqin iyo waxa wanaagsan ee ganacsatada intraday yahay. tilmaame waxay leedahay heer-oolnimada qaraabo ah oo ku saabsan 75%. Waa tilmaame fiican ganacsiga la gaar ahaan haddii aad bilaabayso. Waxa u shaqeeyaa oo uu idin siinayo calaamadaha marka in meel ama la xiro amar aad iyo halkan ka dhigaysa ganacsiga fudud oo duulaan ka yar.
Sidee shaqo tilmaame this?
The tilmaame Urban Towers ku salaysan yahay lix celceliska dhaqaaqin ah oo kala duwan in factor wareeg ay. factor wareeg waa dhimaya ah in loo isticmaalo ee celceliska dhaqaaqin si ay macno u guurto khadka celceliska socdaa weeraryahanka ama gadaal by qiimaha qaar ka mid ah.
Tilmaamahan waa tilmaame isbedel. Tirada sii kordhaya ee celceliska dhaqaaqin u adeegta si ay baabi'inta calaamadaha been ah.
Lixda más kala qaybsan yihiin laba. Saddex celceliska dhaqaaqaan sare iyo saddex celceliska dhaqaaqaan hoose. Saddexda celceliska dhaqaaqaan sare waa aqua midabka halka saddex celceliska dhaqaaqin hoose waa cagaar midabka. Waxaad mar walba ka bedeli kartaa this midabada si aad u dhigma midabada doorashada. Saddexda celceliska dhaqaaqaan sare sida caadiga ah guurto ah siyaabaha si dhow la mid ah, halka saddexda celceliska hoose dhaqaaqaan isku mid. Sidaas daraaddeed dhammaan saddexda celceliska dhaqaaqaan sare waqtiyo gudbo saddexda celceliska dhaqaaqaan hoose.
ka soo bandhigeen khadadka celceliska dhaqaaqin shaxda reebo, tilmaanta sidoo kale soo bandhigay fallaadho kuwaas oo ah calaamadaha ugu weyn ee laga soo galo. ganacsade waxay leedahay inay sugto fallaadho in ay u muuqdaan isaga ama iyada ku meel iibiyay ama amar iibsan a. Mararka qaar, tilmaanta dhalin laga yaabaa fallaadho la mid kasta oo kale oo kaas oo u dhaqmo sida xaqiijin ah ee dhaqankan hore ee qiimaha suuqa ee soo socda.
lagugu tuday sawirka.1. The tilmaame Towers Urban.
midabka ah ee fallaadhaha ahaan waxaa ka mid aqua ama cas. fallaadho aqua wuxuu muujinayaa isbeddel hoos halka fallaadhihii cas muujinaysaa isbeddello ah hoos u dhaca sicirka suuqa. Marka fallaadhaha ahaan, tilmaame ayaa sidoo kale barbaro line a at heerka uu amarka waa in lagu rakibaa. Tani waxay ka caawisaa in la aqoonsado heerka dhabta ah suuqa signalka sidan siiyey caawiyo ganacsade in uu go'aansado in meel amar ama ma dhacdo in uu isagu ama iyadu ma ay ahayd on shaxda markii signal la siiyey. Tusaale ahaan, laga yaabaa in aad qortey shubo iibiyey / shaxda USD ka dibna muddo ka dib in aad iska badasho EUR / USD ah. Ka dibna mid ka mid ah in aad iska badasho EUR / USD ah, aad dareento in ay jirto signal iibiyay in la siiyey in muddo ah ka hor. By eegaya dhibic ka mid ah line iyo fogaanta line ama tirada laambadood oo in la sameeyay ka dibna ka, waxaad awoodi doontaa in si loo ogaado haddii ay tahay waa u qalantaa in ay meel si iibiyay ama in ay sugto signal kale.
Isticmaalka tilmaame Urban Towers in meel iyo amar ku dhow.
fallaadho Aqua - waa in aad meel iibsan a.
fallaadho Red - waa in aad meel si iibiyay a.
Marka u geliya kasta oo ganacsi ah, waa inaad ka fogaataa gelinayn Xirfado marka ay goori goor tahay (haddii ay tahay muddo dheer tan iyo signal la siiyey).
Sidoo kale, waa in aad isticmaasho heerarka stop. Waa in aad isticmaasho faa'iidada ay qaadanayaan iyo joojiyo khasaaraha of cabirku yahay 1:1. Taasi waa, haddii aad meel aad stop khasaaro at 15 Liiska Forbes, Waa in aad meel aad faa'iido ka qaadataan at isku mid 15 Liiska Forbes.
Fig.2. Saarid amarada la isticmaalayo Tilmaame Urban Towers.
Urban Towers Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Urban Towers Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Urban Towers Forex Indicator.mq4?
Download Urban Towers Forex Indicator.mq4
Copy Urban Towers Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Urban Towers Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Urban Towers Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Towers Urban Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousOrod Madyan Forex Tusiyaha
Next articleTaxane Factor Sii 2 Forex Tusiyaha